Madaxweynaha: “Dowladda waxay dhiirigelineysaa nidaamka ganacsiga xorta ah, ganacsatadana waxaa looga fadhiyaa inay canshuurta bixiyaan’’ – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Madaxweynaha: “Dowladda waxay dhiirigelineysaa nidaamka ganacsiga xorta ah, ganacsatadana waxaa looga fadhiyaa inay canshuurta bixiyaan’’
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaasi rasmi ah magaalada Muqdisho uga furey Xarunta Keydka Dhexe ee Shidaalka oo ay hirgeliyeen ganacsato Soomaaliyeed.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeediyay munaasabadda ayaa sheegay in wax lagu farxo ay tahay in mid ka mid ah kaabeyaashii dhaqaalaha ee dagaalka sokeeye ku burburey maanta dib loo unkay.
“Waddankan inagaa ayaa duminay haddaan nahay Soomaali, dib u dhiskiisana inaga ayaa la inooga fadhiyaa. Shirkadda Somali Fuel Company ee mashruucan hirgelisayna waxay qeyb ahaan fulisey baaqii aan horay u soo jeediyay ee ahaa DALKAAGA DHISO. Waddanka si tartiib tartiib ah ayuu uga soo kabanayaa dhibaatadii nagu habsatey’’, ayuu yiri Madaxweynaha.
Waxaa uu intaa ku darey Madaxweynaha in wax walba ay ku qurxoon yihiin marka nidaam loo sameeyo, lagama maarmaanna ay tahay in ganacsigeena uu noqdo mid sharciga waafaqsan.
“Ganacsiga waddankeena waa in shuruuc loo sameeyaa si uu u noqdo mid la jaanqaada ganacsiga kale ee caalamka. Waad aragtaan in ganacsatadeena ay hanti badan geliyeen dalalka shisheeye , iyagoo taas sabab uga dhigaya jiritaanka nidaam iyo sharci ganacsi oo lagu kala dambeeyo. Inaan nidaam sameysano waxay naga caawineysaa soo jiidashada maalgashi ka yimaada dibedda iyo gudaha, haba ugu badnaadeen Soomaalida’’.
Waxaa uu sheegay in dowladdu ay dhiirigelinayso ganacsiga xorta ah, ayna ugu baaqeyso Soomaalida inay horseed ka noqdaan maalgashiga lagu sameynayo waddankooda, si ay horumar u gaaraan.
“Waan dhiirigelinayaa ganacsiga xorta ah. Ganacsatada Soomaalida ee waddankooda maalgashanayaa aad baan u bogaadinayaa, balse waa inaaney ilaabin waajibka kale ee ka saaran bixinta canshuurta si loo dedejiyo dib u dhiska dalka, iyadoo laga duulayo duruufta gaarka ah ee dalkeena haysta’’.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu dambeyn ugu baaqey hay’adaha dowliga ee ku shaqada leh in la dardar-geliyo la socodka tayada badeecadaha kala duwan ee suuqyadeena lagu iibiyo. Munaasabaddan ayaa waxaa ka soo qeybgaley hadalona ka jeediyay mas’uuliyiin ka tirsan labada gole, iyo madaxda shirkadda Somali Fuel Company.
Dhageyso:Warka Habeenimo Ee Radio Dalsan 7-12-2015
Madaxweynaha iyo wakiilka Mareykanka ee Arrimaha Soomaaliya oo ka wada hadley xoojinta xiriirka labada dal